Dr. Cali Macow Aways, Maxaa Hargeysa Loogu Xidhay? – Rasaasa News
Dr. Cali Macow Aways, Maxaa Hargeysa Loogu Xidhay?
Dr. Cali Macow Aways, oo ka mid ah Dhakaatiirta ugu caansan Somalida, waxaa lagu xidhay magaalada Hargaysa xili uu ku jiray shaqo caafimaad. Booliska maamulka Somaliland ayaa xidhay Dr. Cali Macow, wuxuuna sheegay Boolisku in uu sharci daro ku soo galay maamulka.
Dr. Cali Macow Aways, oo haysta dhalashada dalka Jarmalka, ayey baasaboorkiisa ku dhagan tahay vissa uu maamulku ka siiyey garoonka Hargeysa.
Dr. Cali Macow Aways, oo mudo labo maalmood ah ku xidhanaa xarunta Booliska ee Hargeysa, ayaa siidayntiisa waxaa ka qayb qaadatay dawlada degaanka Somalida Atobiya, oo uu asal ahaan ka soo jeedo. Dr. Cali Xaaji Macow, ayaa adeer u ah Engineer, Salaaxudiin Cabdiraxmaan Xaaji Macow, oo ahaa hogaamiyihii garabkii ONLF, ee la heshiiyey Atobiya October 2010.
Dr. Cali Macow Aways, ayaa inta uusan tagin Hargeysa, ka helay ogolaansho maamulka Somaliland, waxaana waraqada fasaxa xirfada shaqo u soo saaray wasiirka caafimaadka Saleebaan Xagla Jabiye.
TV UNIVERSAL, ayaa xaysiin u samaynayey xirfada caafimaad ee Dr. Macow ka fulinayo maamulka Somaliland mudo ka hor inta uusan tagin magaalada Hargeysa.
Hadaba, maxay tahay sababata dhabta ah ee ka dambaysa xadhiga Dr. Cali Macow Aways? Marka dhabta laga hadlo maamulka Somaliland, wuxuu ku salaysan yahay nidaam beeleed, oo kali ku ah danaha beesha Isaaq. Hanaanka maamul ee ka jirana waxaa go,aankiisa leh jilibyada beesha Isaaq.
Maamul beeleedka ka jira Hargeysa, wuxuu marar badan karaamada ka qaadaan dad Somaliyeed oo sharaf leh sabab la,aan. Waxayna u cuskadaan waxayeelada ruuxa beesha uu ka soo jeedo. Xadhiga Dr. Cali Macow Aways waxaa uu la mid yahay dulmiga beeleed ee ay had iyo goorba maamulku u gaysto dadka Somalida ah.
Somalida Waxay tidhaa ama buur ahow ama buur ku tiirsanaow, in kasta oo Dr. Cali Macow ways, waxwalba ka yahay reer Xamar, asal ahaan waxaa uu ka soo jeedaa degaanka Somalida Atobiya. Taasina waa sababta keentay in Dr. Cali Macow, siidayntiisu ay lugta ula gasho dawlada degaanka Somalida Atobiya.
Somalia: Xasan oo Xaal Mastuur Xargaaggtamay!
Madaxwayne Cabdi oo ka Garaabay Garta Beesha Ciise Gudbisay.